ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့ဖြစ်သည် | Resurrection Now! | Real Conversion
လော့စ်အိန်ဂျယ်လ်ရှိ Baptist Tabernacle အသင်းတော်၌ ၂၀၁ဝခုနှစ်
မေလ ( ၂ ) ရက်၊ သခင်ဘုရား၏နေ့ ညနေပိုင်းတွင်
“သို့သော်လည်း ကရုဏာတော်နှင့်ကြွယ်၀တော်မူသော ဘုရားသခင် သည် ငါတို့ကို ချစ်တော်မူသော မဟာမေတ္တာတော်အားဖြင့် ဒုစရိုက် အပြစ်၌ သေလျက်ရှိနေသော ငါတို့ကို ခရစ်တော်နှင့်အတူ အသက် ရှင်စေတော်မူပြီ။ ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။ ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ငါတို့ကို ထမြောက်စေ၍ ကောင်း ကင်အရပ်၌ နေရာပေးတော်မူပြီ။” ( ဧဖက် ၂း ၄- ၆ )
ဝိညာဉ်ရေးရာကို ကိုယ်စားပြုဖို့အတွက် ခရစ်တော်၏နိမိတ်လက္ခဏာကို ပြသခြင်းဖြစ် ပါသည်။ သူသည် ဘုရားသခင်သည် ဝိညာဉ်ရေးရာမျက်စိကျမ်းသူများကို အလင်းပေးနိုင် ကြောင်းပြသရန် မျက်စိကန်းသောသူများကို ကျန်းမာစေသည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာပျက်စီးသူများ ကို ကျန်းမာစေနိုင်ကြောင်းပြသရန် ခြေမစွမ်းသူများကို ကျန်းမာစေပါသည်။ သို့ရာတွင် သူ သည် သေသောသူများကို သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် အသက်ရှင်စေခဲ့သည်။ မာကုအခန်းကြီးငါးကို ကြည့်သောအခါ ယာယု၏သမီးကို သေခြင်းမှထမြောက်စေသည်အကြောင်း သိရသည်။ လုကာအခန်းကြီးခုနှစ်တွင် နာနိအမည်ရှိသောမုဆိုးမ၏သားကို သေခြင်းမှထမြောက်စေပါ သည်။ ယောဟန်အခန်းကြီးတစ်ဆယ့်တစ်တွင် လာဇရုကို သေခြင်းမှထမြောက်စေခဲ့သည်။ ဤထမြောက်ခြင်းမှ ကျွန်ုပ်တို့သင်ယူလေ့လာထားရသောအရာမှာ ယေရှုသည် “အပြစ်တရား ၌သေလျက်ရှိသောသူ” တို့ကို အသက်ရှင်စေနိုင်သည်ဟူသော သင်ခန်းစာဖြစ်ပါသည်။ ( ဧဖက် ၂း ၁ ) ယနေ့ညတွင် ရာရု၏သမီးများစွာရှိကြသည်။ မုဆိုးမ၏ သားများစွာ ရှိကြသည်။ ပြန်လည်ထမြောက်သည့် လာဇရုများစွာ ရှိကြသည်။ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့များစွာသည် အပြစ်တရား၌ သေလျက်ရှိကြပါသည်။ သို့ရာတွင် ခရစ်တော်၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့် ဝိညာဉ် ရေးရာ၌ထမြောက်ပြီး အသစ်သောအသက်တာဖြင့် လျှောက်လှမ်းနိုင်ပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင် တွေ့ကြုံသည့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမှာ “အသစ်ဖန်ဆင်းခြင်း” ဖြစ်ပြီး သေခြင်းမှ အသက်ရှင် ခြင်းအကြောင်းကို ပြောဆိုသည့် စကားလုံးဖြစ်ပါသည်။ အသစ်သောမွေးဖွါးခြင်းဟုလည်း ခေါ် သည်။ ဒေါက်တာ W. G. T. Shedd က သမ္မာကျမ်းစာက “ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို အသစ် ဖန်ဆင်းခြင်းဟု မကြာခဏဆိုလေ့ရှိသည်၊” “အသစ်ဖန်ဆင်းခြင်းကို ဝိညာဉ်ရေးရာထမြောက် ခြင်းဟု မကြာခဏရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်” ဟု ဆိုသည်။ (W. G. T. Shedd, Ph.D., Dogmatic Theology, P and R Publishing, ၂၀၀၃, စာ-၈၆၄၊ ၈၆၅ ) ကိုယ်ကာယနှင့် ဝိညာဉ်ထမြောက်ခြင်းကြားက ဆက်နွယ်မှုကို ဧဖက်အခန်းကြီးနှစ်၏ ဒုတိယပိုင်းက ရှင်းရှင်း လင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။
“သို့သော်လည်း ကရုဏာတော်နှင့်ကြွယ်၀တော်မူသော ဘုရား သခင် သည် ငါတို့ကို ချစ်တော်မူသော မဟာမေတ္တာတော်အားဖြင့် ဒုစရိုက် အပြစ်၌ သေလျက်ရှိနေသော ငါတို့ကို ခရစ်တော် နှင့်အတူ အသက် ရှင်စေတော်မူပြီ။ ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။ ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ငါတို့ကို ထ မြောက်စေ၍ ကောင်း ကင်အရပ်၌ နေရာပေးတော်မူပြီ။” ( ဧဖက် ၂း ၄- ၆ )
ဤကျမ်းပိုဒ်ထဲမှ ကျွန်ုပ်တို့သင်ယူရရှိနိုင်သည့် အသစ်သောမွေးဖွါးခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကြီး မားသည့်အရာသုံးခုရှိသည်။ ထိုသုံးခုမှာ ထမြောက်သောယေရှု၏တန်ခိုးတော်ဖြင့် အသစ်တ ဖန်မွေးဖွါးခြင်းဖြစ်သည်။
၁။	ပထမအချက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူသေဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် သမ္မာကျမ်းစာလာသည်အတိုင်း လူသေဖြစ်ကြသည်။ အချို့ သောသူများက ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျဆုံးခြင်းက ဖျက်ဆီးသည်ဟုဆိုကြသည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ထိုအရာက အသေသတ်ကြောင်းကို မယုံကြည်ကြပေ။ သို့ရာတွင် သမ္မာကျမ်း စာသည် ရှင်းလင်းလွန်းလှသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒဏ်ရာရသူများမဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် “အ ပြစ်တရား၌သေသောသူများဖြစ်ကြသည်” ဟုသာဆိုသည်။ ( ဧဖက် ၂း ၁ ) သို့ရာတွင် ဤသူ တို့က လူ့အထဲ၌ ကောင်းသောအရာများစွာရှိသည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ လူ့သဘာဝကိုယ် တိုင်သည် အပြစ်၌သည်ဟုမဆိုလိုကြောင်းကိုလည်းကောင်း ဆိုကြသည်။ C. G. Finney က အောက်ပါအတိုင်းဆိုသောအခါ မှားယွင်းသောအရာကို သက်သေပြထားပါသည်။
အပြစ်သည် လူသားများအတွက် အဘယ့်ကြောင့် သဘာ၀ဖြစ်နေ ရသနည်း။ သူတို့၏သဘာဝသည် အပြစ်နှင့်ပြည့်နှက်နေသော ကြောင့်မဟုတ်ပါ။ ဤသွန်သင်ချက်အရ သူတို့သည် ဘုရားသခင် ကို ရိုသေလေးစားမှုမရှိခြင်း၊ ဘုရားသခင်ရှေ့၌ စက်ဆုတ်ရွံံရှာ ဖွယ်ဖြစ်ခြင်းနှင့် လူအသိဥာပညာသည် ဘုရားနေရာမှာ ဖယ်ရှား သည့်ခြင်း၊ ခံယူချက်များမှ ဖယ်ရှားသင့်ကြောင်း၊ လောကကြီးမှ ပျက်စီးခံရသင့်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ မှားယွင်း သောအတွေးအခေါ်နှင့်ဆိုင်သည့် အမွေတော်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဩဂတ်စတင်းက ခရစ်ယာန်အယူဝါဒများတွင် ထည့်သွင်းထား သော အကြွင်းအကျန်များဖြစ်ကြပါသည်။ (C. G. Finney, Finney’s Systematic Theology, Bethany ပုံနှိပ်တိုက်, ၁၉၉၄, စာမျက်နှာ ၂၆၈-၂၆၃ )
အပြစ်တရား၌သေလျက်ရှိသည်ဟူသော လူ့အကြောင်းသွန်သင်သည့် ဩဝါဒကို ကျွန်ုပ်တို့အ ထဲက ထုတ်ပယ်ထားသည်။ ထိုအကျိုးကား အဘယ်နည်း။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသော ကိုယ် ကျင့်တရားနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာမင်းမဲ့စရိုက်အသက်ရှင်မှုမျိုးသည် ထိုအကျိုးပင်ဖြစ်ပါသည်။
အပြစ်တရား၌သေလျက်ရှိကြောင်း လူ့အကြောင်း သွန်သင်သောဩဝါဒကို ဩဂတ် စတင်းက စတင်ခြင်းဖြစ်ပါသလား။ ထိုသို့မဟုတ်ပါ။ မျှော်လင့်ချက်မရှိ၊ အကူအညီမရှိဘဲ အပြစ်နှင့်ပြည့်နှက်သောလူသားအကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာတစ်ခုလုံး၌ သွန်သင်ထားပါ သည်။ နောဧခေတ်ကာလတွင် ဤသို့တွေ့ရသည်။
“မြေကြီးပေါ်မှာ လူအပြစ်ကြီး၍၊ သူ၏စိတ်နှလုံး အကြံအစည်ရှိသ မျှတို့သည် အစဉ်မပြတ်ဆိုးညစ်ခြင်းသက်သက်ရှိကြောင်းကို၊ ဘု ရားသခင် သိမြင်တော်မူလျှင်” ( ကမ္ဘာ ၆း ၅ )
ယောဘကျမ်းတွင် ဤသို့ ဖတ်ရှုရပါသည်။
“မသန့်ရှင်းသောအရာထဲက သန့်ရှင်းသောအရာကို အဘယ်သူ ထုတ်ဘော်နိုင်သနည်း။ အဘယ်သူမျှ မထုတ်ဘော်နိုင်ပါ။” ( ယော ဘ ၁၄း ၄ )
“လူသည် အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ သန့်ရှင်းနိုင်သနည်း။ မိန်းမ ဘွားသောသူသည် အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ ဖြောင့်မတ်နိုင်သ နည်း။” ( ယောဘ ၁၅း ၁၄ )
“အကျွန်ုပ်သည် မွေးစကပင် အပြစ်ပါလျက်ရှိပါ၏။ အမိဝမ်းထဲ၌ ပဋိသန္ဒေယူစဉ်ကပင် အပြစ်စွဲပါ၏။” ( ဆာလံ ၅၁း ၅ )
“မတရားသောသူသည် အမိဝမ်းထဲမှစ၍ ရိုင်းသောသဘောရှိကြ၏။ မွေးကတည်းက လမ်းလွှဲ၍ မုသာစကားကို ပြောတတ်ကြ၏။” ( ဆာလံ ၅၈း ၃ )
“လူသားတို့၏စိတ်နှလုံးသည် ဒုစရိုက်သဘောနှင့်ပြည့်၏။” ( ဒေသ နာ ၉း ၃ )
ပရောဖက် ယေရမိက ဤသို့ဆိုသည်။
“စိတ်နှလုံးသည် ခပ်သိမ်းသောအရာထက် စဉ်းလဲတတ်၏။ အလွန် ယိုယွင်းသော သဘောရှိ၏။ စိတ်နှလုံးသဘောကို အဘယ်သူ သိနိုင်သနည်း။” ( ယေရမိ ၁၇း ၉ )
တမန်တော် ပေါလုက ဤသို့ဆိုပါသည်။
“အထက်က လောကီတရားသို့လိုက်၍ ဒုစရိုက်အပြစ်၌သေလျက်ရှိ သော သင်တို့ကို ဘုရားသခင်သည် အသက်ရှင်စေတော်မူပြီ။” ( ဧဖက် ၂း ၁ )
တဖန် တမန်တော်ပေါလုက ကောလောသဲတွင် ဤသို့ဆိုပါသည်။
“သင်သည် အပြစ်တရား၌ သေလျက်ရှိသည်။” ( ကောလော ၂း ၁၃ )
Finney က အပြစ်တရား၌သေလျက်ရှိကြောင်း လူသားအကြောင်းသွန်သင်သည့် ဝါဒ ကို ဩဂတ်စတင်းကိုအတုခိုးပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်ဆိုခဲ့ပြီးသည်အတိုင်း၊ ဤ သွန်သင်ချက်သည် ကျမ်းစာတစ်ခုအဆုံးကနေ အခြားအဆုံးတစ်ခုအထိ ထားရှိသော သွန် သင်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ Finney ၏ အယူအဆသည် မှားယွင်းသောဩဝါဒများထဲက လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ( အေဒီ ၃၅၄- ၄၂၀ )
သူ၏မှားယွင်းသောအယူအဆသည် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာက သန္ဒေတည်နေခဲ့ပါ သည်။ Finney ၏သွန်သင်ချက်သည် ၎င်း၏တွန်းအားတွင် မှားယွင်းသည့်အယူဝါဖြစ်ပါသည်။ လူသည် အသစ်ပြုပြင်ခြင်းမခံရသောအခြေအနေတွင် သေလျက်ရှိပါသည်။ လူသည် ဖျားနာ နေသည်မဟုတ်။ ဘုရားအရာ၌ သေလျက်ရှိပါသည်။
“ဒုစရိုက်အပြစ်၌သေလျက်ရှိသော ငါတို့ကို”။ ( ဧဖက် ၂း ၅ )
ထိုအရာထက် ပိုရှင်းလင်းသည့် အရာရှိပါ သလား။ ဘာမျှ မရှိတော့ပါ။
“အပြစ်တရား၌သေခြင်း” ဟူသည်မှာ ၎င်း၏သဘာဝအခြေအနေတွင် လူ့၏စစ်မှန် သောပုံရိပ်မဟုတ်ပါ။ Spurgeon က ဤသို့ဆိုပါသည်။
လူသေအလောင်းကို လေ့လာကြည့်ပါ။ စေးကပ်စေးကပ်ဖြစ်နေ ပေလိမ့်မည်။ သင့်ကို အနာတရဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်း သည် ငိုကြွေးခြင်း၊ ထိုအရာပေါ်တွင် ကြီးမားသည့် ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုး လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတော့ ရှိလိမ့် မည်မဟုတ်။ သင်သည် ထိုအလောင်းကို အမှောင်ထဲတွင် ထည့် ထားနိုင်သည်။ သို့သော် ကြောက်စိတ်ရှိမည်မဟုတ်။ ထို့ကြောင့် မပြောင်းလဲသေးသောသူသည် အပြစ်ဝန်ထုတ်ကို ထမ်းလျက်နေ ပါသည်။ သို့ရာတွင် ထိုအရာအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မှုတော့မရှိပါ။ ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်း၏ ချုပ်နှောင်မှုကို ခံနေရပါသည်။ သို့သော် သူသည် လွတ်မြောက်ဖို့ကို မကြိုးစားပါ။ ဘုရားသခင်၏ ကြိမ်ခြင်းအောက်သို့ ရှိမြဲရှိနေပါသည်။ ထိုကျိန်ခြင်းက စိတ်နှလုံး ထဲ၌ လှုပ်ရှားမှုမပြုနိုင်ပါ။ အကြောင်းမှာ သူသည် သေလျက်ရှိ သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် သေလျက်ရှိသလော၊ သို့မ ဟုတ် အသက်ရှင်ပါသလော။ သင်သည် ကြုံတွေ့ရမည့် အမျက် တော်မှာ ကယ်တင်ခြင်းမရမှီတိုင်အောင် တိတ်ဆိတ်စွာ မနေနိုင် ပါ။ လူသည် ဝိညာဉ်အရာအတွက် စိတ်ထဲတွင် ထည့်သွက်ခြင်းမ ရှိပါ။ ထိုအရာက လှုပ်ရှားစေခြင်းမျိုးမရှိပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆို သော် သူသည် ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ သေသောသူဖြစ်ပါသည်။ (C. H. Spurgeon, “ခရစ်တော်နှင့်အတူ ထမြောက်ခြင်း,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, ခရီးသွား ပုံနှိပ်တိုက်, အတွဲ ၁၄၊ စာ- ၂၀၇၊ ၂၀၈ )
သင်သည် ဘုရားကျောင်းတွင် ထိုင်ပြီး သင့်အတွက် အကျိုးမရှိသည့် တရားဒေသနာ ကို ကြားကောင်းကြားနိုင်သည်။ အကြောင်းမှာ သင်သည် “အပြစ်တရား၌သေသော”ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် ခရစ်တော်၏ဒုက္ခ ဝေဒနာခံစားခြင်းကို ကြားနိုင်သည်။ လက်ဝါးကပ် တိုင်မှာ သံမှုနှင့်ရိုက်ကာ အသေခံသည့်အကြောင်းကိုလည်းကြားနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် သင့်အ တွက် အလေးထားစရာမရှိ။ အကြောင်းမှာ သင်သည် “အပြစ်၌သေ” သောကြောင့်ဖြစ်ပါ သည်။ ခရစ်တော်သည် သေခြင်းမှထမြောက်ပြီး တပည့်တော်များထံတွင် ထင်ရှားတော်မူ သည်ကို “မမှားနိုင်သော သက်သေပြချက်များ” ဖြင့် ကြားနိုင်ပါသည်။ ( တမန် ၁း ၃ ) ထမြောက်ခြင်း၏တန်ခိုးအားဖြင့် ရွှေ့လျားရန်မဟုတ်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သင်တို့သည် “အပြစ်၌လေလျက်ရှိသည်။” သင်သည် အသွေးတော်ကို ကြားနိုင်သည်။ သင့်အပြစ်ကို ဆေး ကြောပေးနိုင်သည်။ ဆေးကြောခြင်းအတွက် သင့်လိုအပ်ချက်ကို ခံစားရန်မဟုတ်။ အကြောင်း မှာ သင်သည် “အပြစ်၌ သေလျက်ရှိသည်။” စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့် တခြားသူများ၏ ဆု တောင်းခြင်းကို သင်ကိုယ်တိုင် ကြားသိနိုင်ပါသည်။ မိမိကိုယ်တိုင်ဆုတောင်းသည်အတိုင်း ဆု မတောင်းနိုင်ပါ။ အကြောင်းမှာ သင်သည် “အပြစ်တရား၌ သေလျက်ရှိပါသည်။” သင်သည် သမ္မာကျမ်းစာ အကြီးကြီးကို ဝယ်ယူပြီး ဖတ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုနုတ်ကပတ်တော်၌ အ သက်မရှိပါ။ သင့်အတွက် စကားလုံးမျှသာဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ သင်သည် “အပြစ်၌ သေလျက်ရှိပေသည်။ အခြားသူများသည် ယုံကြည်ခြင်းတရား၌ ဝမ်းမြောက်ကြသည်။ သို့ သော် သင့်အသက်တာ၌ ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိ။ အကြောင်းမှာ “သင်သည် အပြစ်၌သေလျက်ရှိ ပါသည်။” အခြားသူများက ခရစ်တော်ကို သိကြသည်။ ထိုသိခြင်း၌ ဝမ်းမြောက်ကြသည်။ သို့ သော် သင်သည် သူ့ကို မသိ။ သူ့အပေါ် ကြောက်စိတ်ဖြင့် သံသယဝင်နေသည်။ အကြောင်း မှာ သင်သည် “အပြစ်၌သေလျက်ရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။” အခြားသူများက သင့်အား ခရစ် တော်ထံသို့လာရန် ပြောကြသည်။ သို့သော် သင်က ထပ်ခါထပ်ခါ မေးမြန်းသည်မှာ “မည်သို့ လာရမည်နည်း” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ “သူ့ထံ မည်သို့လာရမည်နည်း။ အဖြေက သင့်ကို လွတ် မြောက်စေသည်။ သင်သည် ထိုအရာကို နားမလည်ပါ။ အကြောင်းမှာ “သင်သည် အပြစ်၌ သေလျက်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။”
သင်သည် သင်ယူလေ့လာခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် ကြိုးစားအားထုတ်နေ လျှင် အခြေအနေတိုင်းက အတူတူပင်ဖြစ်မည်အကြောင်းကို ပြောပြချင်ပါသည်။ သင်သည် “ကယ်တင်ခြင်းရနည်း” ကို သင်ယူလေ့လာ၍မရပါ။ လုံးဝမရပါ။ သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်း အစီအစဉ် နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ်တွင် - သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ လုံး၀ သင်ယူလေ့လာ၍ မရနိုင်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သင်သည် “အပြစ်ထဲ၌ သေနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်သည် ကျမ်းစာကိုလေ့လာလေလေ၊ မေးခွန်းမေးလေလေ၊ အဆိုးသာ ရောက်လာလေ လေဖြစ်သည်။ တချိန်က စိတ်ဝင်စားမှုအနည်းငယ်သည်ပင် ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။ သင်သည် လုံး၀ပျောက်လဲခြင်းမရှိဘဲ ဘုရားကျောင်း၌ပင် မျှော်လင့်ချက်မဲ့လျက် ထိုင်နေပေ လိမ့်မည်။ အကြောင်းမှာ သင်သည် “အပြစ်ထဲ၌ သေနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။”
“ အမြဲသင်ယူလေ့လာသော်လည်း သမ္မာတရားကို လုံး၀ ရရှိခြင်းမရှိပါ။” ( ၂ တိ ၃း ၇ ) နောက်ဆုံးတွင် သင်သည် အပြစ်ထဲ၌သေလျက် နောက်ကမ္ဘာတွင် မိမိကိုယ်ကို မြင် နေရလိမ့်မည်။ ထိုအရပ်တွင် သင်သည် ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကို ခံရမည်။ ဘုရားမျက်မှောက်တော် ထဲကနေ ထာဝရ ငိုကြွေးခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။ ထိုအရပ်သည် ထာဝရမှောင်မိုက်အတိဖြစ်ပြီး မျှော်လင့်ချက် လုံးဝမရှိပါ။ ( ယုဒ ၁၃ ) အကြောင်းမှာ သင်သည် “အပြစ်၌ သေနေသော ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ )
ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေပြုကျမ်းက မျှော်လင့်ချက်ပေးထားသည်။ ထိုမျှော်လင့် ချက်သည် ခရစ်တော်၌ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ထဲ၌ ရှိပါသည်။ ထိုအရာသည် ကျွန်ုပ်၏ အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာသည် သင့်အဖို့ဖြစ်ဖို့ရန် ဆုတောင်းပါသည်။ ဘုရားသခင် ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိသော ကျွန်ုပ်တို့က ထမြောက်သောယေရှုက အ သက်ရှင်စေသည်ဟု ဆိုကြပေမည်။
၂။	ဒုတိယအချက်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကျန်းမာစေသည်။
အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး အပိုဒ်လေးနှင့်ငါးကို ဖတ်ကြပါစို့။
“သို့သော်လည်း ကရုဏာတော်နှင့်ကြွယ်၀တော်မူသော ဘုရား သခင် သည် ငါတို့ကို ချစ်တော်မူသော မဟာမေတ္တာတော်အားဖြင့် ဒုစရိုက် အပြစ်၌ သေလျက်ရှိနေသော ငါတို့ကို ခရစ်တော် နှင့်အတူ အသက် ရှင်စေတော်မူပြီ။ ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။” ( ဧဖက် ၂း ၄- ၅ )
အို၊ အပြစ်သား နားထောင်ကြပါ။ တမန်တော်၏စကားကို နားထောင်ကြပါ။ “သို့ရာ ဘုရားသခင်သည်။” ထိုစကားလုံးတို့တွင် မျှော်လင့်ချက်ရှိပါသည်။ “သို့သော် ဘုရားသခင် သည်။” သင်တို့သည် အပြစ်၌သေလျက်ရှိကြသည်၊ “သို့သော် ဘုရားသခင်သည်။” ထိုစကား လုံးများအတွက် ဘုရားသခင်ကို ချီမွမ်းရမည်။ သင်တို့သည် ထိုစကားများကို ကြားသောအခါ ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြရမည်။ “သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်သည်။” ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်း သမိုင်းတွင် ထိုအရာကို လက်တွေ့အသုံးချရမည်။ ဖြစ်သမျှသည် မျှော်လင့်ချက်မဲ့လာသောအ ခါ၊ ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်က ကြားဝင်ပေးပြီး “သို့သော် ဘုရားသခင်သည်” ဟူသော ဧဖက် ၂း ၄ စကားလုံးကို မိန့်ဆိုနိုင်ပါသည်။
ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးသည် အပြစ်ကြောင့် ပျက်စီးသည်ဟု ဘုရားသခင်က မိန့်တော်မူ ပြီး ဘုရားသခင်က “ဖန်ဆင်းထားသမျှသော လူတို့ကို ဖျက်ဆီးမည်” ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ( ကမ္ဘာဦး ၆း ၇ ) “သို့ရာတွင် နောဧသည် ဘုရားသခင်၏ရှေ့၌ မျက်နှာရသဖြင့်၊” ( ကမ္ဘာ ၆း ၈ ) “သို့သော် ဘုရားသခင်သည်” မိမိကိုယ်တိုင် ကြားဝင်ဖြန်ဖြေပေးပြီး နောဧနှင့်မိသားစုကို ရေလွှမ်းမိုးခြင်းထဲက ကယ်တင်ခဲ့သည်။ ဂျူးလူမျိုးတို့သည် ဖာရောဘုရင်လက်အောက်တွင် ဒုက္ခဝေဒနာခံရကြပါသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် မောရှေအား “အီဂျစ်လူမျိုးတို့၏လက် ထဲမှ သင့်ကို ငါကယ်နှုတ်မည်။ လက်တော်အားဖြင့် သူတို့လက်ထဲက ရွေးထုတ်မည်။ တရား စီရင်ခြင်းမှ လွတ်စေမည်ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ လူမျိုးတစ်စုအနေဖြင့် မိမိအတွက် ငါသိမ်း ဆည်းမည်။ ငါသည်လည်း သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ဖြစ်မည်။ ငါသည် ဘုရားသခင်ထာဝရဘု ရားဖြစ်တော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ကျွန်ခံရာ အီဂျစ်ပြည်မှ နှုတ်ဆောင်သောသူဖြစ် ကြောင်းကိုလည်းကောင်း သင်တို့သည် သိရကြမည်” ( ထွက် ၆း ၆- ၇ ) ဟု မိန့်တော်မူသည်။ “သို့သော် ဘုရားသခင်သည်”။ တရားသူကြီးများခေတ်တွင် ဂျူးလူမျိုးများသည် မိဒျန်လူမျိုး များကြောင်း အလွန်ဆင်းရဲပင်ပန်းကြသည်။ ( တရား ၆း ၆ ) သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်သည် ဂျုံ စပါးနယ်ရင်း “မိဒျန်လူမျိုးများ၏ ရန်မှ တိမ်းရှောင်ရန် ကြိုးပမ်းသည့်” ဂိဒေါင်ထံ၌ ထင်ရှား တော်မူခဲ့သည်။ ( တရား ၆း ၁၁ ) “ထာဝရဘုရားသည် ဂိဒေါင်အားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ငါ သည် သင်နှင့်အတူရှိမည်။ သင်သည် မိဒျန်လူမျိုးတို့ကို လူတစ်ဦးကဲ့သို့ ကွဲပြားစေမည်။” ( တ ရား ၆း ၁၆ ) ထိုအခါ ဂိဒေါင်က “ထလော့၊ ထာဝရဘုရား၏လက်တော်သည် မိဒျန်လူမျိုးတို့ လက်မှ ငါတို့ကို ကယ်တင်မည်” ဟု ဆိုသည်။ ( တရား ၇း ၁၅ ) “သို့သော် ဘုရားသခင်သည်”။ ယေရှုသည် ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံရသည်၊ ရိုက်နှက်ခြင်း၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာ သံမှုနှင့်ရိုက် ခြင်း၊ သင်္ချိုင်းထဲ၌ သင်္ဂြိုလ်ခြင်းကို ခံရသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် သူ့ကို သေခြင်းမှ ထမြောက်စေသည်။ “ဘုရားသခင်သည် သူ့ကို သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် ထမြောက်စေ သည်။” ( တမန် ၁၀း ၄၀ ) “သို့သော် ဘုရားသခင်သည်။” ယစ်ပုရောဟိတ်နှင့်သူ့လူတို့သည် တမန်တော်တို့ကို ခေါ်ဆောင်၍ အချုပ်ထဲတွင် သော့ခတ်ထားကြသည်။ ( တမန် ၅း ၁၈ ) ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် ဧဝံဂေလိတရားဟောပြောခြင်းကို ရပ်တန့်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ “သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်တို့သည် ညအချိန်၌ ထောင်တံခါးကိုဖွင့်က ထ၍သွားပါ။ အသက်နှင့်ယှဉ်သော စကားကို ဗိမာန်တော်၌ ဟောပြောလော့ဟုဆိုသည်။ ( တ မန် ၅း ၁၉- ၂၀ ) “သို့သော် ဘုရားသခင်သည်” ထောင်တခါးများကိုဖွင့်ပေးကာ သူတို့၏ တရားဟောပြောခြင်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေပါသည်။
တဖန် သမ္မာကျမ်းစာတစ်ခုလုံးကို ကြည့်ရှုသောအခါ၊ ဘုရားသခင်၏သနားခြင်းကရု နှင ္႔ပတ်သက်သော သာဓကတစ်ခုကို ပေးထားပါသည်။
“သို့သော်လည်း ကရုဏာတော်နှင့်ကြွယ်၀တော်မူသော ဘုရား သခင် သည် ငါတို့ကို ချစ်တော်မူသော မဟာမေတ္တာတော်အားဖြင့် ဒုစရိုက် အပြစ်၌ သေလျက်ရှိနေသော ငါတို့ကို ခရစ်တော် နှင့်အတူ အသက် ရှင်စေတော်မူပြီ။ ( ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။ )” ( ဧဖက် ၂း ၄- ၅ )
ဘုရားသခင်သည် နောဧမိသားစုတို့အပေါ် သနားခြင်းကရုဏာထားသည်အတိုင်း၊ မောရှေ၏ အချိန်ကာလ၊ ဂိဒေါင်၏အချိန်ကာလ၊ တမန်တော်တို့၏အချိန်ကာလနှင့်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်းအချိန်ကာလတို့တွင်လည်း သင်တို့ကို သနားမည်ဟု မထင်လိုက်ပါနှင့်။
ကျွန်ုပ်တို့အလယ်တွင် “လျှင်မြန်စေသောသူများကို ကြည့်ရှုပါ။ သေခြင်းမှထမြောက် သူများကို ကြည့်ရှုပါ။ ခရစ်တော်၌ ဘုရားသခင် အသက်ရှင်စေသောသူများကို ကြည့်ရှုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏သင်းအုပ်ဆရာများ၊ အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များကို ကြည့်ပါ။ သူတို့သည် တစ် ချိန်က “အပြစ်၌သေသောသူများဖြစ်ကြသည်။” သို့ရာတွင် ယခုတွင် သူတို့သည် အတူတကွ ခရစ်တော်နှင့်အတူ ရှိနေကြသည်ကို ကြည့်ပါ။ သူတို့သည် ကျေးဇူးတော်ဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း ကို ခံကြပြီး ခရစ်တော်၌ အသက်ရှင်ကြပါသည်။ သူတို့ကို ခရစ်တော်နှင့်အတူ အသက်ရှင်စေ ခြင်းမဟုတ်ဟု အဘယ်သူပြောနိုင်သနည်း။ သူတို့သည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ သေခြင်းမှထ မြောက်ခြင်းကို မည်သူ သံသယရှိနိုင်မည်နည်း။ Spurgeon က ဤသို့ဆိုသည်။
နုံခြာသည့် မာသကတော့ ယေရှုသည် မောင်ဖြစ်သူ ( လာဇရု ) ကို သေခြင်းမှထမြောက်စေသည့်အတွက် များစွာ အံ့ဩလိမ့်မည်။ သို့ သော သူမက ထိုထက်မက အံ့ဩသည့်ပုံစံဖြင့် ဆိုသည်။ “ငါ့ကို ယုံကြည်သူသည် သေခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်ကို ယုံသလော” ဟု၍ဖြစ်သည်။ ( ယောဟန် ၁၁း ၂၆ ) ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရမည့် အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိညာဉ်အသက်ကို ရလာသောအခါ ၎င်းသည် ခရစ်တော်၏ အ သက်နှင့်ပေါင်းစပ်လာခြင်းဖြစ်သောကြောင့် လုံး၀ သေနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ (Spurgeon, ibid., p. 214).
လုံး၀ သေမည်မဟုတ်သည်မှာ မှန်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်မွေးသူများအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Finney ၏ မှားယွင်းသည့်ဖော်ပြချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့သည် ငြင်းပယ်ကြသည်။ Finney က “သူတို့ကို ဖော်ပြထားသည်။ ကယ်တင်ခြင်းသည် အဆုံးထိတိုင်အောင် ဖြောင့် မတ်စွာ အသက်ရှင်ခြင်းအပေါ်တွင် မူတည်သည်ဟုဆိုသည်။ သူတို့သည် ပျောက်ဆုံးမည်ကို ကြောက်လျက် အနည်းဆုံး ဘုရားသခင်ကို ခေါ်သင့်ပါသည်။ (Charles G. Finney, Finney’s Systematic Theology, Bethany House Publishers, ၁၉၉၄၊ ၁၈၇၈ တွင် ပြန်လည်ပုံနှိပ်သည်၊ စာ- ၅၄၆ ) ဟုတ်ပါသည်။ Finney က ကယ်တင်ခြင်းရရှိသောသူသည် မိမိကယ်တင်ခြင်းကို ဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါသည်။ တကယ်တော့ Finney က ခရစ်ယာန်တစ်ယောက် သည် ကောင်ကင်ကနေလဲကျပြီး ကယ်တင်ခြင်းကို သေပြီးနောက် ဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်ဟုဆိုပါ သည်။ Finney ၏ ဓမ္မပညာစာအုပ်မှ အရှိအတိုင်းကိုးကားထားသည်မှာ ဤသို့ဖြစ်သည်။ “ကောင်းကင်၌ရှိသောသန့်ရှင်းသူများပင်လျှင် မှားယွင်းပြီးလဲကျနိုင်သည်။ ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။” (C. G. Finney, ၎င်း၊ စာ- ၅၀၈ ) ဟုတ်ပါသည်။ Finney က ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်သည် ကောင်းကင်မှလဲကျပြီး ပျောက်ဆုံးနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
ဤသည်မှာ မှားယွင်းသော သွန်သင်မှုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ငြင်းပယ်ပါသည်။ ပြောင်းလဲပြီးသောသူများသည် “မပြောင်းလဲသူများအဖြစ်သို့” ပြန်မရောက်နိုင်ပါ။ ပြုပြင်ခြင်းခံ ရပြီးသူသည် “ပြုပြင်ခြင်းမခံရသူများအဖြစ်” ပြန်မရောက်နိုင်ပါသည်။”
“ဒုစရိုက်အပြစ်၌ သေလျက်ရှိနေသော ငါတို့ကို ခရစ်တော်နှင့်အ တူ အသက် ရှင်စေတော်မူပြီ။ ( ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ ကယ် တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။ )” ( ဧဖက် ၂း ၅ )
Spurgeon က “ဘုရားသခင်၏အသက်ကို ရရှိပြီးနောက်၊ သူသည် လုံး၀ မဆုံးရဟု ဆိုသည်။ ဘုရားသခင်သည် အတွင်းပိုင်းအသက်တာဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို တွန်းအားမပေးပါ။ ဖျက်လည်း မဆီးပါ။ သူသည် ယနေ့ကယ်တင်ပြီး မနက်ဖြန် မဖျက်ဆီးပါ။ ဘုရားသခင်ဘုန်းကြီးပါစေ။ သင်သည် မတည်မြဲသောအသက်တာတွင် ခရစ်တော်၌ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင် လိမ့်မည်။ ထိုအရာအတွက် ဝမ်းမြောက်နေမည်။ ဘုရားသခင်အား ချီးမွမ်းပါ။ (Spurgeon, ၎င်း၊ စာ- ၂၁၅ ) နောက်ထပ် ဆုံမှတ်တစ်ခုမရှိတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သေသောသူများဖြစ် ကြသည်။ ကျွန်ုပ်ုတို့ကို အသက်ရှင်စေသည်။ သို့ရာတွင်၊
၃။	တတိအချက်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို ထမြောက်စေသည်။
အပိုဒ်ငယ် ငါးနှင့်ခြောက်ကို မတ်တပ်ရပ်ပြီး ကျယ်လောင်စွာ ဖတ်ပါ။
“ဒုစရိုက်အပြစ်၌ သေလျက်ရှိနေသော ငါတို့ကို ခရစ်တော်နှင့် အ တူ အသက်ရှင်စေတော်မူပြီ။ ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ ကယ်တင် ခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။ ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ငါတို့ကို ထမြောက်စေ၍ ကောင်း ကင်အရပ်၌ နေရာပေးတော်မူပြီ။” ( ဧဖက် ၂း ၅- ၆ )
“ခရစ်တော်ထံ မည်သို့လာရမည်နည်း” ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မေးမြန်းကြည့်ပါ။ သူတို့သည် ခရစ်တော်ရှိရာ တတိယကောင်းကင်ကို သိကြသဖြင့် မေးခွန်းထုတ်ကြသည်။ ( ၂ ကော ၁၂း ၂ ) ခရစ်တော်သည် အာကာသကောင်းကင်အထက်၊ ကြယ်နက္ခတ်တာရာတို့အလွန်၌ ကျိန်း ဝပ်တော်မူသည်။ ထိုနေရာကို “ပရသိသုဘုံ” ဟု ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်လေ့ရှိပါသည်။ ( လုကာ ၂၃း ၄၃ ) ခရစ်တော်သည် ထိုအရပ်တွင်ရှိကြောင်း၊ ဘုရားသခင်၏လက်ယာဘက်တွင် ထိုနေတော် မူကြောင်းကို ကျမ်းစာထဲ၌ ဖတ်ရှုရပါသည်။ “ထိုအရပ်ကို မည်သို့ရောက်နိုင်မည်နည်း” မေးမြန်းကြသည်။ “အခြားကမ္ဘာကနေ ထိုအရပ်သို့ ခရစ်တော်ထံ မည်သို့ ရောက်လာနိုင်မည် နည်း။” ကောင်းပါပြီ၊ အဖြေကတော့ အမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ သင်သည် ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအား ထုတ်မှုတစ်ခုတည်းဖြင့် ထိုအရပ်သို့ မရောက်နိုင်ပါ။ သို့ရာတွင် “ဆုံးဖြတ်ချက်ဝါဒ”သည် ထိုအ ကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး မသိနားမလည်သောအရာများစွာ ရှိပါသည်။ သူတို့သည် မိမိကြိုးစား အားထုတ်မှုဖြင့် ခရစ်တော်ထံသို့ လာနိုင်သည်ဟု ထင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် ယောဟန် ၆း ၄၄ ကို ဖတ်ရှုသောအခါ ထိမိ၍ လဲစရာဖြစ်သည်။
“ငါ့ကို စေလွှတ်တော်မူသော ခမည်းတော်သည် သွေးဆောင်တော် မမူလျှင်၊ အဘယ်သူမျှ ငါ့ထံသို့ မလာနိုင်။ လာသောသူကို နောက် ဆုံးသောနေ့၌ ငါထမြောက်စေမည်။” ( ယောဟန် ၆း ၄၄ )
ဘုရားသခင်က ခရစ်တော်နှင့် ချီဆောင်ခြင်းအချိန်၌တွေ့နိုင်ရန် သာ၍နီးစေမည်ကို ယုံကြ သည်။ ( ၁ သက် ၄း ၁၆-၁၇၊ ၁ ကော ၁၅း ၅၁- ၅၃ ) သို့ရာတွင် ကယ်တင်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်လာလျှင် မယုံကြည်ရဲကြပေ။ နှစ်ခုစလုံးကို ရှင်ယောဟန် ၆း ၄၄ တွင် တွေ့ရှိရပါ သည်။
ဘုရားသခင်၏တူညီသောတန်ခိုးသည် လေပြင်တွင် ခရစ်တော်နှင့်တွေ့ရန် ခရစ် ယာန်များကို ဆွဲခေါ်သည်။ ဘုရားသခင်၏လက်ယာဘက်တွင်ရှိသော ခရစ်တော်ထံသို့ ယခု ဆွဲခေါ်ရပါမည်။ အပြစ်သားကို ဘုရားသခင်ထံ ဆွဲခေါ်သည်မှာ ဘုရားသခင်သာလျှင်ဖြစ်ပါ သည်။ အပြစ်သားကိုယ်တိုင်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်သာလျှင်ဖြစ်သည်။ “ခမည်းတော်သည် ဆွဲ ခေါ်တော်မမူလျှင်၊ အဘယ်သူမျှ ငါ့ဆီသို့မလာနိုင်။” ၎င်းသည် ချီဆောင်ခြင်းနှင့်တူညီသည်။ သို့သော် ခရစ်တော်ထံသို့လာသောအခါ ဖြစ်ပျက်လျက်ရှိပါသည်။ ခရစ်တော်ထံသို့ရောက်လာ သည့် ခဏချင်းတွင် ဖြစ်ပျက်လျက်ရှိပါသည်။ ဧဖက် ၂း ၆ ကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ ထိုအရာကို လေ့ လာပါ။ ထိုကျမ်းပိုဒ်ကို မတ်တပ်ရပ်ပြီး ကျယ်လောင်စွာ ဖတ်ပါ။
“ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ငါတို့ကို ထမြောက်စေ၍ ကောင်းကင်အ ရပ်၌ နေရာပေးတော်မူပြီ။” ( ဧဖက် ၂း ၆ )
ဒေါက်တာ Hendriksen က ဤအပိုဒ်နှင့်ပတ်သက်၍ “ ကျွန်ုပ်တို့ကို အသက်ရှင်စေပါ သည်၊ ထမြောက်စေလျက် ကောင်းကင်အရပ်၌ နေရာပေးပါသည်” ဟု ဆိုပါသည်။ (William Hendriksen, Ph.D., New Testament Commentary, Baker Book House, ၁၉၈၁၊ စာ- ၁၁၈၊ ဧဖက် ၂း ၆ မှတ်စု ) လီဖော်မေးရှင်းကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုပါသည်။
… ကျွန်ုပ်တို့ကို အသက်ရှင်စေသည်၊ ထမြောက်စေသည်။ နေရာ ပေးသည်။ ဤသည်တို့မှာ ခရစ်တော်၏အသက်တာတွင် သမိုင်း ဖြစ်ရပ်များဖြစ်ပါသည်။ သူ၏ သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းနှင့် ဘုရား သခင့်လက်ယာတော်ဘက်၌ ထိုင်နေခြင်းပါဝင်သည်။ သို့ရာတွင် ရှင်ပေါလုက ထိုအရာကို ယုံကြည်သောသူတို့၌ဖြစ်ပျက်သောအ ရာနှင့်ဆက်စပ်စေသည်။ ပေါလုက ခရစ်တော်နှင့်သူ့ထံလာသော သူတို့ကြားက စည်းလုံးမှုကို သင်ကြားပေးသည်။ ရွေးနှုတ်ကယ် တင်သောသူပြောသောစကားကို ရွေးနှုတ်ခံရသူများက ကြားသိ နိုင်ကြ၊ သတိရနိုင်ကြပါသည်။ (The Reformation Study Bible, Ligonier Ministries, ၂၀၀၅၊ စာ- ၁၇၀၆၊ ဧဖက် ၂း ၅၊ ၆၊ မှတ်စု )
ခရစ်တော်ထံသို့ လာခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်နှင့်တန်ခိုးတော်အားဖြင့် ဖြစ်နိုင် သောအရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြောင်းလဲလာသောအခါ ခရစ်တော်ထံသို့ စိတ်နှလုံးကို သာ၍ နီးကပ်စေပါသည်။
ထို့နောက် သင်သည် အမှန်တကယ် ပျောက်ဆုံးနေသေးလျှင် မည်သည့်အရာကို လုပ်ဆောင်မည်နည်း။ ယေရှုက “ကောင်းကင်ဘုံသို့ဝင်ရန် ကြိုးစားအားထုတ်ပါ” ( လုကာ ၁၃း ၂၄ ) ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ဤတရားဒေသနာက်ို ထပ်ခါထပ်ခါ ဖတ်ပါ။ “ထိုအထဲသို့ဝင်ရန်” ရှိသမျှနှင့်ကြိုးစားပါ။ “ခေါက်ပါ”၊ တံခါးကို ဖွင့်လိမ့်မည်။” ( လုကာ ၁၁း ၉ ) ဂရိစကားလုံးက “ဆက်လက်ခေါက်ရန်၊ ဆက်လက်ဆုတောင်းရန်” ဆိုထားသည်။ ဘုရားသခင်သည် သင့်၏ အပြစ်နှင့်ပြည့်နေသောအခြေအနေ၊ ပျောက်ဆုံးသောအခြေအနေကို နိုးထလာစေရန် အချိန် မရွေးဆုတောင်းပါ။
သင့်ဝိညာဉ်ကို အမြန်ကယ်ကျွတ်ရန် ဘုရားသခင်အားဆုတောင်းပါ။ သင့်အသက် တာကို ရှင်သန်စေရန် ခရစ်တော်ထံ သာ၍ နီးကပ်စေရန် ဘုရားသခင်ကို ဆုတောင်းပါ။ ငရဲ ပြည်၏ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ ခရစ်တော်မပါဘဲထာဝရ ကုန်ဆုံးမည်ကို စဉ်းစားပါ။ “ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ရန် ကြိုးစားပါ။” ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ အသက်ရှင်စေမည်။ “ခရစ် တော်ယေရှုနှင့်အတူ ကောင်းကင်အရပ်၌ နေရာ ပေးတော်မူမည်။” ထိုဝမ်းမြောက်ခြင်းသည် သင့်အသက်တာတွင် အလျှင်အမြန်ရောက်လာပါစေ။ သင့်ကို အလျှင်အမြန် အသက်ရှင်စေ ပါစေသော်။ ယေရှုခရစ်နှင့်အတူ ကောင်းကင်အရပ်၌ နေရာပေးပါစေ။ အပြစ်တရား၌ သေ လျက်ရှိသောသင်သည် ထမြောက်ခြင်းကို ခံစားရပါစေ။ ခရစ်တော်၌ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုး တော်အားဖြင့် ဒုတိယမွေးခြင်းခံရပါစေသော်။ အာမင်။
“သို့သော်လည်း ကရုဏာတော်နှင့်ကြွယ်၀တော်မူသော ဘုရား သခင် သည် ငါတို့ကို ချစ်တော်မူသော မဟာမေတ္တာတော်အားဖြင့် ဒုစရိုက် အပြစ်၌ သေလျက်ရှိနေသော ငါတို့ကို ခရစ်တော်နှင့်အတူ အသက် ရှင်စေတော်မူပြီ။ ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ ကယ်တင် ခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။ ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ငါတို့ကို ထမြောက်စေ၍ ကောင်း ကင်အရပ်၌ နေရာပေးတော်မူပြီ။” ( ဧဖက် ၂း ၄- ၆ )
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ရွက်ခြင်း၊ ဧဖက် ၂း ၁- ၇
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ဂုဏ်တော် ချီးမွမ်းခြင်း၊ “အပြစ်သား၊ လာပါ” (Joseph Hart, ၁၇၁၂-၁၇၆၈ ၊ Anna W. Waterman, ၁၉၂၀ က “ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်သိသည် သံစဉ်ယူလိုက်သည်။ ).
( ဧဖက် ၂း ၁ )
၁။	ပထမအချက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူသေဖြစ်ကြသည်။ ဧဖက် ၂း ၁၊ ကမ္ဘာ ၆း ၅၊ ယောဘ ၁၄း ၄၊ ၁၅း ၁၄၊ ဆာလံ ၅၁း ၅၊ ၅၈း ၃၊ ဒေသနာ ၉း ၃၊ ယေရမိ ၁၇း ၉၊ ဧဖက် ၂း ၁၊ ၃၊ ကောလော ၂း ၁၃၊ ဧဖက် ၂း ၁၊ ၅၊ တမန် ၁း ၃၊ ၂ တိမော ၃း ၇၊ ယုဒ ၁၃။
၂။	ဒုတိယအချက်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကျန်းမာစေသည်။ ဧဖက် ၂း ၄- ၅၊ ကမ္ဘာ ၆း ၇၊ ၈၊ ထွက် ၆း ၆-၇၊ တရားသူကြီး ၆း ၆၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၇း ၁၅၊ တမန် ၁၀း ၄၀၊ တမန် ၅း ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ယောဟန် ၁၁း ၂၆။
၃။	တတိအချက်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို ထမြောက်စေသည်။ ဧဖက် ၂း ၅- ၆၊ ၂ ကော ၁၂း ၂၊ လုကာ ၂၃း ၄၃၊ ယောဟန် ၆း ၄၄၊ ၁ သက် ၄း ၁၆- ၁၇၊ ၁ ကော ၁၅း ၅၁- ၅၃၊ လုကာ ၁၃း ၂၄၊ ၁၁း ၉။